GED के हो ®? | को GED® उपाधि बारेमा जान्न र परीक्षण कसरी लिन | USAHello
GED के हो ®?
धेरै मानिसहरू हामीलाई सोध्न, "GED के हो?"द GED® उपाधि शो तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय पूरा गर्ने कसैले जस्तै ज्ञान छ कि. तपाईंको GED® उपाधि प्राप्त तपाईं बढी सफल हुन मदत गर्न सक्छ. यो तपाईं एक राम्रो काम र तिमी कलेज जाने अनुमति दिन्छ गर्न सक्नुहुन्छ. यस प्रश्नको जवाफ थाहा तपाईंलाई सबै सिक्न, “GED के हो ®?"
ज्ञान सहायता फाउंडेशन को फोटो सौजन्य.
धेरै अमेरिकी र केही शरणार्थी र आप्रवासी उच्च विद्यालय समाप्त गर्न सकेनौं. एक उच्च विद्यालय उपाधि बिना, यो एक राम्रो काम प्राप्त र संयुक्त राज्य अमेरिका मा सफल गाह्रो हुन सक्छ. तर तपाईं GED® परीक्षण पास यदि, तपाईं एक उपाधि प्राप्त (प्रमाणपत्र) आफ्नो राज्य बाट. यो एक उच्च विद्यालय equivalency भनिन्छ (HSE) उपाधि, त्यसैले तपाईं कहिलेकाहीं हेर्न वा सुन्न सक्छ आफ्नो परीक्षण एक HSE परीक्षण रूपमा उल्लेख.
को GED® उपाधि तपाईं उच्च विद्यालय पूरा गर्ने कसैले जस्तै कौशल छ भन्छन्. यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो! मात्र तपाईं शिक्षा हासिल हुनेछ, तर तपाईं राम्रो काम विकल्प हुनेछ.
को GED® परीक्षण कस्तो छ?
परीक्षण लाग्न. यसलाई चार भागमा विभाजित छ तपाईं अलग दिनमा लाग्न सक्छ कि. तपाईं कम्प्युटरमा परीक्षण हुनेछ. तपाईं अंग्रेजी मा परीक्षण लाग्न सक्छ, स्पेनी, वा फ्रान्सेली.
परीक्षण मा के?
त्यहाँ परीक्षण मा चार विषयहरू छन्: सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, र भाषा कला (पढाइ र लेखन). तपाईं धेरै प्रश्नहरूको जवाफ र एक निबंध लेखन हुनेछ.
तिमी सक्छौ परीक्षण को लागि अध्ययन. तपाईं पनि गर्न सक्छन् परीक्षण कसरी लिन पत्ता.
म GED® परीक्षण को लागि कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ?
USAHello मुक्त अनलाइन GED® कक्षाहरू परीक्षण मा प्रत्येक विषय कवर. जब तपाईं तैयार तपाईं एक वर्ग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा विद्यार्थी दुई महिना दुई हप्ता भित्र एक विषय समाप्त. तपाईं सुरु र कुनै पनि बेला रोक्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पाठ फेरि कब्जामा लिनु सक्नुहुन्छ. के तपाईं सुरु गर्न चाहनुहुन्छ जो विषय छनौट गर्न सक्नुहुन्छ.
मेरो राज्य प्रस्ताव गर्ने GED® प्रमाण गर्छ?
तपाईं हरेक राज्य मा GED® परीक्षण लिन सक्दैन. जो परीक्षण आफ्नो राज्य प्रस्ताव छ पत्ता लगाउन तलको तालिका हेर्न.
यदि आफ्नो राज्य GED® परीक्षण प्रदान गर्दैन, ठिक छ! तपाईं अझै पनि बस राम्रो छ कि एक उपाधि प्राप्त गर्न सक्छन्. तपाईं आफ्नो राज्य मा TASC परीक्षण वा HiSET परीक्षण लाग्न सक्छ. फेरि हेर्न तालिका हेर्न जो एक.
के हो HiSET ™?
को HiSET परीक्षण GED® परीक्षण जस्तै छ. को HiSET ™ उपाधि तपाईं नै ज्ञान र संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय पूरा गर्ने कसैले रूपमा कौशल छ भन्छन्.
को TASC परीक्षण GED परीक्षण जस्तै छ. को TASC परीक्षण पारित तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय स्नातक गर्ने एक व्यक्ति जस्तै ज्ञान र सीप छ देखाउँछ.
म GED® परीक्षण कसरी लिन गर्छन्?
को परीक्षण लिन, तपाईं एक परीक्षण केन्द्र जान छ. यो परीक्षण कम्प्युटरमा हुनेछ.
निःशुल्क GED® अभ्यास परीक्षण
तपाईं अब परीक्षण पारित गर्न तयार छन् भने हेर्न एक अभ्यास परीक्षण लिन, वा के तपाईं थप अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने साइन इन गर्नु अघि.
GED® तयारी कक्षाहरू
को GED® परीक्षण लागि तयारी गर्न सबै चार विषय अध्ययन.
को GED® परीक्षण कसरी लिन
तपाईं लागि दर्ता र GED® परीक्षण लिन आवश्यक जानकारी पाउन. जब तपाईं सबै चार विषयहरू पारित गरेको छ, तपाईं एक उपाधि प्राप्त हुनेछ.
म अर्को देश बाट एक उपाधि छ. म अझै पनि एक HiSET प्राप्त गर्नुपर्छ, TASC वा GED® प्रमाण?
तपाईं एक उच्च विद्यालय उपाधि छ भने, तपाईं वा एक HiSET आवश्यक छैन सक्छ, TASC वा GED® प्रमाण. तर तपाईं समाप्त स्कूल कलेज जाने वा काम प्राप्त गर्न प्रमाण आवश्यक पर्दछ. तपाईं प्रमाण छैन भने, संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक उपाधि प्राप्त तपाईंलाई मदत गर्नेछ.
तपाईं GED® परीक्षण को लागि छात्रवृत्ति छन्?
कुनै, हामी GED® परीक्षण को लागि कुनै पनि छात्रवृत्ति छैन.
यहाँ एक छ पोर्टल्याण्ड नजिकै बस्ने मान्छे को लागि छात्रवृत्ति, ओरेगन. तपाईं थप छात्रवृत्ति को थाहा छ भने, कृपया हामीलाई इमेल र हामी त यहाँ सूची हुनेछ अधिक मान्छे GED® छात्रवृत्ति पाउन सक्नुहुन्छ कि.
को GED® परीक्षण मा के?